Umbona njani umzali onetyhefu | IBezzia
Ungamazi njani umzali onetyhefu
UMaria Jose Roldan | 19/03/2021 22:39 | Fundisa abantwana
Kunqabile ukufumana umzali oqondayo ukuba iyityhefu emntwaneni wakhe kwaye ukondla okunikiweyo akonelanga. Ukuba ngumzali olungileyo kuxhomekeke kakhulu kumaxabiso abonelelwe kumntwana wakho ngexesha lokufunda komntwana. Utata kufuneka amncede umntwana ukuba akhulise ubuntu obuchanekileyo kunye nokuziphatha okufanelekileyo.
Ukuba akunjalo, umzali usenokungasebenzi kakuhle kwaphela kwaye uthathwa njengomzali onetyhefu. Kwinqaku elilandelayo sinika iinkcukacha iimpawu ezaziwa njengabazali abanetyhefu zihlala zinazo kwaye ungayilungisa njani ukuze inkqubo yokuba ngumzali yeyona ilungileyo.
1 Ukuzikhusela ngokugqithisileyo
2 Kubaluleke kakhulu
5 Babeka uxinzelelo kwizifundo
6 Ayilunganga kwaye ayonwabanga ngehlabathi
Ukuzikhusela ngokugqithisileyo yenye yeempawu ezicacileyo nezicacileyo zomzali onetyhefu. Umntwana kufuneka abe noxanduva lweempazamo azenzayo kuba oku kuya kumnceda ukuba enze ubuntu bakhe ngokuthe ngcembe. Ukhuseleko olugqithisileyo kwicala labazali akulunganga ekukhuleni okuhle komntwana.
Akuncedi nto ukungcikiva nokugxeka abantwana ngalo lonke ixesha. Ngale nto, ukuzithemba kwabantwana kunye nokuzithemba kuthotywa kancinci. Ngokufanelekileyo ,vuyisana nabo ngempumelelo yabo kunye neenjongo zabo. Ukugxekwa ngabazali kushiya abantwana bezikhusela ngalo lonke ixesha kwaye baziva bengento yanto kuyo yonke into abayenzayo.
Abazali abanetyhefu bahlala bezingca ngabantwana babo. Abaziniki ukubaluleka iimfuno ezahlukeneyo abanazo abantwana kwaye bacinga ngeziqu zabo kuphela. Ukuzingca kuthambekele ekubeni nefuthe elibi kwimeko yeemvakalelo zomntwana kwaye kunokubangela amanqanaba aphezulu oxinzelelo kunye noxinzelelo.
Igunya eligqithisileyo lolunye lweempawu ezicacileyo zabazali abanetyhefu. Ababhetyebhetye ebusweni babo nakuphi na ukuziphatha kwabantwana babo kwaye banyanzelisa igunya labo ngalo lonke ixesha, elibangela ukuziva benetyala ebantwaneni. Ngokuhamba kwexesha aba bantwana baba ngabantu abadala abaneengxaki ezininzi zeemvakalelo echaphazela kakubi ubomi bakho bemihla ngemihla.
Babeka uxinzelelo kwizifundo
Awunakunyanzela umntwana ukuba afunde into angayifuniyo. Uninzi lwabazali lucinezela abantwana babo ukuba bakhethe ikhondo elithile lomsebenzi ngaphandle kokuthathela ingqalelo eyona nto bayifunayo.
Ayilunganga kwaye ayonwabanga ngehlabathi
Abazali abanetyhefu abonwabanga ngalo lonke ixesha kwaye abonwabanga ngobomi ababuphilayo. Oku kungakhathali kunye nokuphelelwa lithemba kwamkelwa ngabantwana ngazo zonke izinto ezimbi ezibandakanya oku. Ngokuhamba kwexesha baba lusizi kwaye bangonwabi abantwana abangonelisekanga yiyo nantoni na.
Ekugqibeleni, ityhefu yabazali ifunxwa ngabantwana, into ezalisekayo xa ufikelela kwinqanaba labadala. Abazali mabakhulise abantwana babo bethathela ingqalelo uthotho lweenqobo ezinjengentlonipho okanye uthando ukuqinisekisa ukuba bangabantu abalungileyo kwixesha elide. Kubalulekile ukuba abantwana babe nakho ukukhula ngokupheleleyo kwaye bangabanqandi ngendlela yokuhlukumeza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Ungamazi njani umzali onetyhefu
Khulisa kwibhalkoni yakho, yenza igadi yasezidolophini
Kubalulekile ukwenza igumbi lokuhlamba ekhaya